उधोगमन्त्रीको घुर्कीदेखि ट्याक्सी चालकको घृणित व्यबहारसम्म | Kendrabindu Nepal Online News
21179055 759452 6430596 13989007
१५ चैत्र २०७५, शुक्रबार १७:२५
देश विदेशमा आज थुप्रै सकारात्मक तथा नकारात्मक घटना परिघटनाहरु भए । ति घटनाक्रमहरुलाई हामीले केन्द्रबिन्दु डटकम र केन्द्रबिन्दुको युट्युब च्यानल मार्फत निरन्तर पलपलमा अपडेट गर्यौ । यसरी अपडेट भएका अनेकौ समाचारहरु मध्ये प्रमुख समाचारहरुलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौ । हाइलाइट गरिएको शिर्षकहरुमा क्लिक गरेर बिस्तृत समाचार पढ्न सक्नु हुन्छ ।
कुर्सी नपाएपछि उद्योगमन्त्री यादव लगानी सम्मेलनबाट बाहिरिए
लगानी सम्मेलनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले बस्ने कुर्सी नपाएपछि उनी सम्मेलनबाट बाहिरिएका छन् । लगानी सम्मेलनको पत्रकार सम्मेलनमा समेत अनुपस्थित रहेका यादवले आफ्नो सीट नभेटेपछि झोक्किएर हलबाट बाहिरिएका हुन् । उनी झोक्किएर बाहिर निस्किएपछि थामथुम पारेर हलभित्र ल्याउने प्रयास गरिएको थियो। तर त्यो प्रयास सफल हुन सकेन । उनी हलभित्र नआएपछि उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडा, वाणिज्यका सचिव केदारबहादुर अधिकारी र उद्योग विभागका महानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंह समेत बाहिरै मन्त्रीसँगै बसेका थिए।
४ घण्टाभित्र देशभरका एसईईको प्रश्नपत्र रुजु गर्न निर्देशन
शिक्षा मन्त्रालयले ४ घण्टाभित्र एसईईको प्रश्नपत्र रुजु गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रदेश २ मा लगातार एसईई परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले देशभरको प्रश्नपत्र ४ घन्टाभित्र रुजु गर्न निर्देशन दिएको हो । प्रदेश २ मा बिहीबार विज्ञान र शुक्रबार सामाजिक विषयको प्रश्नपत्र बाहिरिएको थियो । प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि आकश्मिक रुपमा बसेको बैठकले ४ घण्टाभित्र पश्नपत्र रुजु गर्ने निर्णय गरेको हो । शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले यस अघि नै जिल्ला जिल्लामा पठाईसकिएका प्रश्नपत्रको रुजु गरी मुचुल्का तयार पारी रिपोटिङ गर्न जिल्लास्थित सुरक्षा समितिलाई निर्देशन दिएको हो ।
मानवीयता मरेको एउटा दृष्टान्त: जसले बिरामीलाई बाटोमै मिल्काए (भिडियो)
सामान्यत: अस्पताल आउजाउ गर्न र यस्तै आपतकालीन अबस्थामा बाध्यताबश ट्याक्सी चढ्ने गरिन्छ । प्राइभेट सवारीसाधन नहुनेहरुका लागि ट्याक्सीको कुनै बिकल्प पनि छैन। यसरी बाध्याताबश चढिने ट्याक्सीका चालकहरुमा मानवीयताको स्तर चाँही कति होला ? ट्याक्सी भाडाको सम्बन्धमा त धेरै टिका टिप्पणी र बहसहरु भैरहेका छन्। उता ट्याक्सी चालकहरुले पनि समयानुकुल भाडा समायोजनका लागि आन्दोलन गरिरहेकै छन्। तर यहा एकजना ट्याक्सी चालकले अलिकति पनि मानवीय समबेदना नराखेको प्रसङ्ग छ। जसले बिरामीलाई अस्पताल लैजानुको सट्टा बाटोमै मिल्काए। उनको यिनै अमानवीयताका कारण बिरामीको मृत्यु भयो।
अष्ट्रेलियामा नेपालीको सवारी दुर्घटना: एकको मृत्यु, ४ जना घाइते
अष्ट्रेलियामा नेपालीले चलाएको कार दुर्घटना भएको छ। दुर्घटनामा एक जना नेपालीको मृत्यु भएको छ भने ४ जना नेपाली घाइते भएका छन्। सिड्नीबाट अल्बरीतर्फ गइरहेको कार बिहीबार दुर्घटना हुँदा आर्यन आचार्यको मृत्यु भएको छ भने चालक बलराम पराजुली गम्भीर घाइते भएका छन् । आचार्य कारको अघिल्लो सिटमा मृत अबस्थामा भेटिएकोन्यू साउथ वेल्स प्रहरीले जनाएको छ।
लगानी सम्मेलनका बारेमा जान्नैपर्ने ५० कुरा
तेस्रो लगानी सम्मेलन शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा शुरु भएको छ । सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई व्यापारको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासँग आग्रह गरेका छन् । प्रस्तुत छ लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरि हाकाहाकीले तयार पारेको ५० बुँदा।
विदेशी लगानीकर्ताको एउटै मत, ‘हामी नेपालमा लगानी गर्छौ’
नेपालमा लगानी सम्मेलन सुरु भएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उदघाटन गरेका छन् । काठमाडौंको होटल सोल्टीमा आयोजित विशेष समारोहकाबीच लगानी बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार बिहान सम्मेलनको उदघाटन गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले ‘सर्पको खेल’ भनेपछि कांग्रेसको जवाफ: आमाका अगाडि मावलाको बयान !
नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पदीय गरिमा बिर्सेको आरोप लगाएको छ। बिहिबार नेकपा प्रदेश ३ को पहिलो बैठकको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कठैबरा कांग्रेस ! सर्पको खेलजस्तो ९९ मा पुगेर स्वाट्टै २ मा झरेको’ भन्दै व्यङ्ग्य गरेका थिए।
विप्लवका लागि वार्ताको ढोका सधैं खुल्ला छ : नेता भट्टराई
पहिलो शिशु जन्मिएको १ महिना नपुग्दै जुम्ल्याहा शिशु !
आज पनि मेघ गर्जनसहित वर्षा हुने सम्भावना
विप्लवका नगरकोट इन्चार्जसहित दुई जना पक्राउ
हिन्दु राष्ट्र पुर्नस्थापना गर्न राप्रपाले तोक्यो बुद्धिमानलाई कमाण्डर
१३० मध्ये ११६ तुइन विस्थापन
साँईली हेर्दा रोएकी सुन्तलीलाई धुर्मुसले सम्हाल्न सकेनन् (भिडियोमा)
यसका साथै केन्द्रबिन्दु डटकममा आज राजनीति, सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक, प्रबिधि, कला, लाइफस्टाइल, खेलकुद, बिश्व बिबिध, बिचार लगायतका समाचारहरु प्रकाशन भएका छन् । सबै समाचार पढ्न यहाँ क्लिक गर्न सक्नु हुन्छ। त्यस्तै केन्द्रबिन्दुको युट्युब च्यानल मा पनि बिभिन्न समाचार र मनोरोजनात्मक सामग्रीहरु प्रकाशन भएका छन् ।
kendrabindu main news, matrika yadav, Nepali Taxi, SEE exam papper
Prevचक्र बमको कमेडी डिजे गीत, ‘पैसा कात्तरो’
३ महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा पत्रकार नै पक्राउNext
बढ्यो ट्याक्सीको भाडा, अब सुरुमा १५ र एक किमी गुडेपछि ५३ रुपैयाँ उठ्ने